1. သံမဏိကွိုင်အထူ: 0.5-3.0mm
2. သံမဏိကွိုင်အကျယ်: 500-1250mm
3. ကွိုင် ID: ф508, ф610;
4. ကွိုင် OD: ф1000 ～ ф1600mm;
5. ကွိုင် Max.weight: 7.0 တန်;
၆။ သံမဏိကွိုင်ပစ္စည်း: Low Cold steel coil
7. ဖြတ်တောက်ခြင်းတိကျမှု၊ အကျယ် Franchise ± 0.15mm;
8. အပြားပြားအထူ: .0mm2.0mm;
9. Slit shaft diameter: Ф180, material 40Cr， forge, tempering, mid frequency headening ။
ဓါးပြားအရွယ်အစား: Ф180× 50250 × 10mm, ပစ္စည်း: 6CrW2Si, မာကျောမှု: HRC56-58
12. ဖြတ်တောက်မြန်နှုန်း: 0-40m/min;
၁၄။ လိုင်းအမြင့်: ၈၀၀ မီလီမီတာ
II ။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏နည်းပညာစီးဆင်းမှု
ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး→အစာကျွေးခြင်း→ uncoiler →ဆွဲခြင်း→ပြေးခြင်းစားပွဲ→လမ်းညွှန်→ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်→အပိုင်းပိုင်းအကွေ့အကောက်များ
၅ - ၁၂
၅၀၀ - ၁၂၅၀ မီလီမီတာ
1 -6မီလီမီတာ
10 - 60 မီလီမီတာ
PLC, ဂီယာအုံ, ဂီယာ
အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ စုံစမ်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ကွင်းဆင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု
စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ရေးဆိုင်များ၊ စက်ရုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာစက်ရုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ
အီဂျစ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ပါကစ္စတန်၊ ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ယူအေအီး၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကာဇက်စတန်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ မလေးရှား
ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုသော့ချက်မှာ Online Product Exporter China API 5lx42 X46 X50 ERW Steel Tube Mill ASTM A53 Tube Specification ဖြောင့်တန်းသောသံမဏိပိုက်၊ "ဖြောင့်တန်းသောချုပ်ရိုးသံမဏိပိုက်"၊ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာထူထောင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကမ္ဘာကြီး
အွန်လိုင်းတင်ပို့သူတရုတ် ERW သံမဏိပိုက်၊ ချောမွေ့စွာပိုက်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသောအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေး ၀ ယ်ယူသူတိုင်းအားကျေနပ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောချေးငွေ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းရန်ရိုးသားစွာမျှော်လင့်သည်။ ငါတို့ကမင်းနဲ့ကျေနပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်များကို ၀ ယ်ယူရန် ၀ ယ်သူများကိုလည်းနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
“ အကွာအဝေးအမြင့်ဆုံးသောကုန်ပစ္စည်းများဖန်တီးခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း” ဟူသောယုံကြည်ချက်ကိုမှီဝဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့် ERW Round Tube Mill၊ New Delivery အတွက် New Delivery အတွက်ပထမနေရာတွင်စျေး ၀ ယ်သမားများ၏စွဲဆောင်မှုကိုထားလေ့ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ပေါ်လာသည်။ စျေးကွက်ကို ဦး တည်ပြီး ၀ ယ်သူကို ဦး တည်သောအရာများသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်နေသောအရာများဖြစ်သည်။ Win-Win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ရိုးသားစွာထိုင်ပါ။
တရုတ်ပိုက်ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်ပို့ဆောင်မှုအသစ် အချိန်တိုအတွင်းမှာအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်တော့မှမပျောက်ကွယ်သွားစေဘဲ၊ အဲဒါကမင်းအတွက်အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုပဲ။ “ သမ္မာသတိ၊ ထိရောက်မှု၊ ပြည်ထောင်စုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု” ဟူသောမူအားဖြင့်လမ်းညွှန်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်း ၎င်း၏နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်၊ ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ rofit နှင့်၎င်း၏တင်ပို့မှုအတိုင်းအတာကိုမြှင့်တင်ပါ။ ငါတို့ကတောက်ပတဲ့အလားအလာရှိဖို့နဲ့နောင်လာမယ့်နှစ်တွေမှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုဖြန့်ဝေသွားမယ်လို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်။
ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အကြားစီးပွားရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပြန်အလှန်အကျိုးများဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအပြိုင်အဆိုင်တန်ဖိုးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကိုတရုတ်ထုတ်လုပ်သူအတွက်အာမခံပေးနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးတူလုပ်ငန်းအတွင်းမှအသင်းအဖွဲ့များကိုရှာဖွေနေသည့်အတိုင်းလုပ်ကိုင်ရန်အားပေးပါသည်။ မင်းဟာငါတို့အတွက်အကျိုးပြုရုံသာမကအကျိုးအမြတ်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်မယ့်နေရာကိုရှာမှာသေချာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသင့်အားလိုအပ်သောအရာများပေးနိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
China Pipe Machine for China Pipe, Pipe Making Machine, with the innovating spirit of“ high efficiency, convenience, practicality and innovation”, and in line of such serving guidance of“ good quality but better price,” and“ global credit”, ငါတို့သည် win-win partner ဖြစ်အောင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။
Slitting line ၏နည်းပညာစီးဆင်းမှု
ကွိုင်ကား သိုလှောင်မှု→ Uncoiler →ဂေါ်ပြားဘုတ်သုံးကိရိယာ→ပြားချပ်ချပ် the စွန်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း ering အလယ်ဗဟိုစက်→ Disc ဖြတ်တောက်ခြင်း Slitter→ပြန်ရစ်သည် →ပလက်ဖောင်း expanding ချဲ့ထွင်တည်နေရာရှာဖွေခြင်း→ Recoiler →တက်ကြွသောအထောက်အပံ့လက်မောင်းကိုဖိထားပြီးစားပွဲပေါ်တင်ထားပါ→စွန့်ပစ်သည် ကွိုင်ကား
CR ကွိုင်၊ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ၊ HR ကွိုင်
Material Tensile Strength အားကောင်းခြင်း
၁၁၀၀ မီလီမီတာမှ ၂၀၀၀ မီလီမီတာ
508mm & 610mm (customer order)
အနည်းဆုံး ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ အများဆုံး ၁၆၀၀ မီလီမီတာ
အနည်းဆုံး ၁.၀ မီလီမီတာ၊ အမြင့်ဆုံး ၆.၀ မီလီမီတာ
တစ်ကြိမ် 1.0-2.0mm, 0-80m/min
2.0mm ကျော်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် 0-60m/min
၃ မီလီမီတာအထူ ≤၆ အပိုင်း
28 × 9.5m (အလျား X အကျယ်)
ဓါးလှီး ရိုးတံ အချင်း 260မီလီမီတာ
ရိုးတံ ပစ္စည်း 40Cr
forge, tempering, အလယ်ကြိမ်နှုန်း headening ဓါး ပစ္စည်း H13ဓါး မာကျောမှုHRC56-58
ယခင်: U ပုံစံထုတ်ကုန် Cold Roll Forming machine
နောက်တစ်ခု: ZJ2000 ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုင်း
သတ္တုကွိုင် Slitter စက်
Slitting Line အတွက် Slitter
ကာဗွန်သံမဏိ ERW သံမဏိဂဟေဆက်ပိုက်ပိုက်စက်
LW1200 Cold Roll Forming ကြိတ်စက်